TORITENY Alahady 06 Novambra 2017 | FJKM Amboniloha
“Miandry y Tompo ny vavolombelona mino”
Salamo 33 : 18 – 22 / Lioka 2: 36-38 / Romana 8 : 19 -25
Ny hevitry ny fanoloran-jaza dia : fanefana voady, satria notahian’I Jehovah, fidiovan’ny renin-jaza, fanolorana ny zaza vao teraka ho isan’ny ankohonan’Andriamanitra.
Inona no manamarika ny fiainan’ny vavolombelona mino miandry ny fihavian’ny Tompo ?
I- Manao ho zava-dehibe ny fiainam-panahy aho
Lioka 2 : 34 ; 36 Simeona, Ana nanaiky ampiasain’ny Fanahy Masina ka mandany androny sy manorina ny ho aviny ao an-tranon’I Jehovah amin’ny fanompoana Azy , manana faharetana amin’ny fitandremana ny didin’Andriamanitra.
Raha miandry ny Tompo aho , manao ahoana ny fiainako ny fahamarinana , ny famakian-teny , ny fiainam-bavaka , izany hoe raha adika amin’ny teny tokana : tena ato anatiko ve ary manaiky hiasan’ny Fanahy Masina aho ?
Lesona : Miandry ny fihavian’ny Tompo aho , omaniko tsara ary ataoko mari-pototra ny fianam-panahiko mba ahafahako miatrika an’I Jesoa Kristy Ilay efa nekeko ho Tompo sy Mpamonjy ahy.
II- Mahafantatra izay inoako aho
Simeona dia nilaza fa Jesoa Kristy no :
Loharanom-pamonjena (cf Salamo 33 : 18) Matokia an’I Jehovah fa Hery sy ampingany Izy , fantany tsara ary mari-pototra ny fokevitra itiavany an’io Jesoa izay itokiany sy ivavahany io.
Loharanom-pahazavana : resy lahatra izy fa izay mandeha eo Aminy dia tsy mba mandeha amin’ny aizina , ny ota no aizina manarona ny olombelona , ka ny fiarahana lalana amin’I Jesoa Kristy Ilay fahazavan’izao tontolo izao no azo antoka fa hizorana amin’ny lalana marina ho amin’ny fiainana mandrakizay.
Maty hamonjy ny mpanota : famonjena sy fanavotana miantoka ny fidirana ho amin’ny fiainana mandrakizay , izany no mibahana ao am-pon’I Simeona ka ampianariny fa maty hamonjy ny olona rehetra Jesoa Kristry , tena manana anjara amin’izany izaho izay mpanota.
Lesona : Tena iainako ve ny hoe Jesoa Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ? ahoana no fomba ampiharako izany amin’ny fiainako andavan’andro ?
Vavolombelona mino ary miandry ny fihavian’ny Tompo aho , ataoko ho zava-dehibe ny fikolokoloana ny fiainam-panahiko, fifandraisako amin’Andriamanitra,, fiainam-bavaka , famakian-teny , ary koa fantariko tsara ilay Jeso Kristy izay inoako ka ho vavolombelona hifampizara amin’ny hafa ny fahatsarany aho.